RAVALOMANANA MARC - VOKA-PIFIDIANANA : Manery ny kandidany tsy hanaiky resy ?
Na mbola tsy ofisialy aza dia efa hitahita soritra ny havoakan’ny voka-pifidianana ofisialy miainga avy amin’ny fironana avoakan’ny Céni. 2 décembre 2019
Saika nibaby faharesena avokoa ny kandida natolotry ny antoko Tiako i Madagasikara tamin’ny renivohi-paritany manerana an’i Madagasikara. Anisany tena misongadina amin’izany ny eto Antananarivo Renivohitra sy tao Antsirabe. Ireto farany dia toerana azo lazaina fa tena nanjakan’ny antoko Tim ary saika mahazo ny ampaham-bato maro an’isa foana ny kandidan’ny Tim amin’ireo renivohitra roa ireto. Tamin’ity fifidianana indray mitoraka ity anefa dia niova tanteraka ny rasa.
Ny mpampahalala vaovao manohana ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc aza dia efa sahy nilaza mialoha ny fifidianana fa “halain’izy ireo hatrany Antananarivo sy Antsirabe”. Diso fanantenana tanteraka anefa izy ireo satria samy resy teo amin’ny tany niaviany avy ny Kandida natolony. Araka ny vaovao miparitaka any anatin’ny tambajotran-tserasera ankehitriny dia efa mikononkonona tsy fanekena voka-pifidianana ofisialy sahady ny filohan’ny antoko Tim, Ravalomanana Marc. Ny tenany rahateo no nanolotra an’ireo kandida ireo. Manery ny kandidany tsy hanaiky ho resy aza ve izany ny Filoha teo aloha, Ravalomanana Marc ? Ny kandida avy amin’ity antoko ity mantsy dia milaza fa nisy ny hosoka sy ny hala-bato tamin’iny fifidianana iny, ary tena manizingizina izany izy ireo. Araka ny loharanom-baovao voaray dia baiko avy amin’ny Filoha, Ravalomanana Marc no mametraka an’io tsy fanekena ho resy io ary manamafy ny fisian’izay hala-bato izay. Fotoana fohy monja taorian’ny nanombohan’ny fanisam-bato ny alarobia 27 novambra lasa teo dia nanao fanambaràna tao amin’ity kaonty “facebook”-ny ny Kandida Guy Rivo, Kandida Tim tao Antsirabe.
Ny tenany izay nanaiky fa resy avy hatrany. Voalaza fa tsy nahafaly an-dRavalomanana izany satria aminy dia tsy misy resy tsy miady izany, ka mikasa ny mbola hiady mafy ny tenany. Fantatra anefa fa maro amin’ireo mpikambana ao anatin’ ity antoko ity no tsy manaiky ny hisian’ny korontana eto amin’ny firenena intsony. Miroso mankany amin’ny faharavana ny antoko Tim ankehitriny. Efa niala an-daharana ny ankamaroan’ny mpikambana mahafatra-po. Tsy tazana intsony ny tena mpitolona, ny toerana nofehezin’ny antoko Tim tsy azy intsony.